जबजब सहर आउँछिन् आमा
दिक्क मान्छिन् छोराको कोठामा -
काले, किन धोइराख्छस् रुमाल ?
सधैं चिसाको चिस्सै !!
सिकसिको लाग्दैन, हँ ?
धन्न बचिन्छ !
हुँदैन आँसुको कुनै गन्ध
हामी पनि कमका छैनौं
आमाको पछ्‌यौरा ठूलो ओसिलो रुमाल हो
पत्तै पाउँदैनौँ ...
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, December 29, 20130: Comments
भूमिका बाँध्नुलाई बोलीचालीमा पनि निकै महत्व दिइन्छ । कतै कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा आफ्नो गुदी कुरा बोल्नुअघि भूमिकाले बनाउँछ वातावरण । तर, हामीकहाँ कार्यक्रममा भूमिकालाई झ्याउलाग्दो कुरा मानिन्छ र स्रोता तथा सँगै मञ्चमा रहेका सहवक्ताहरु समेत हाइ काढ्न थाल्छन् । भूमिका बोल्नेले पनि सामान्यतया ‘श्रीमान् सभापतिज्यू’ सम्बोधन जस्ता हल्काफुल्का कुरा तन्काएरै समय निलिदिन्छ । आफूसँग गुदी कुरा नै नभएपछि भूमिकामै अल्झाउनु उसले बुद्धिमानी ठान्दो हो सायद ।
नेपाली पुस्तकमा प नि भूमिका लेखनलाई हेर्ने दृष्टिकोण लगभग यस्तै छ ।
पढ्नेले भूमिकालाई बेस्वादको पाना ठान्छ । भूमिका लेख्नेले आफ्नै पुस्तकमा पनि यो कामलाई झारा टार्ने मेलो सम्झिन्छ । उसले कि त आदर्शको रट लगाउँछ, कि त कलाको अनावश्यक प्रदर्शन गर्दै अनेक कथा-उपकथा जोड्छ । (भूमिका कुनै पनि पुस्तकको परिचय र पाठकसँग सम्बन्ध विस्तारको पहिलो खुड्किलो भन्ने पाटोलाई कमैले ख्याल गर्छन् ।) अनि कुनै वरिष्ठ लेखकलाई आफ्नो पुस्तकमा भूमिका लेखाएर ‘गुणस्तर प्रमाणचिह्न’ प्राप्त गरेको ठान्नेहरुको त झन् ठूलै जमात छ । ‘ठूला लेखक’ले लेखिदिने भूमिका मानौं हरेक अक्षरहरुका लागि लालमोहर हो, भूमिकासँगै ती सुकेका र लोलाएका अक्षरमा प्राण भरिन्छ ! भूमिकाको नाममा कसैबाट तारिफको पुल र प्रगति विवरणको तला थपिएपछि नयाँ पुस्तकका लेखक मक्ख नपरुन् पनि कसरी ? फेरि सम्मान गरेर भूमिका लेखिमाग्न आउनेमाथि अग्रजबाट आलोचनात्मक हरफ हत्तपत्त फुस्किँदैन र अर्कातिर कृतिकार पनि सहँदैनन् आफ्नो आलोचना । मिलनविन्दु !
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, December 22, 2013 1 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, December 18, 2013 1 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, November 01, 2013 1 : Comments
दशैं नभए जिन्दगानी …
काठमाडौंबाट दशैंका लागि घर जाने सोच बनाउँदै थिएँ, यस्तैमा झ्वाट्ट लाग्यो – यतिबेला गाउँका साथीहरु ससुराली जाने सोच बनाइरहेका होलान् ।
विदेशमा पनि छन् कतिपय साथीभाइ । तिनको लागि ‘घर : एक सपना’ भए पनि घर-संसारमै रहेर व्यवहारको रकेट चलाइरहेकाहरुका लागि मन फेर्ने लोकेसन ससुराली बन्छ । बिहेअघि चोकमा बारम्बार भेट हुने साथीहरु साइकलमा बुढियालाई पछिल्तिर बोकेर ससुरालीतिर गुडेको दृश्य धेरै पटक देखेको छु । अहिले साइकलको ठाउँ मोटरसाइकलले लियो होला, फरक त्यत्ति ! उनीहरुसँग बसेर एक झमट अनुहार नियाल्न र स्कुले दिनका बदमासी र पाप-पुन्यका लेखाजोखा गर्न नपाएको युग भएछ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, October 11, 20132: Comments
भीमसेन स्तम्भ #Dharhara
गाउँघरतिर किसानलाई रासायनिक मलको सधैं अभाव भइरहँदा शहरका प्रमुख चोकमा ‘सपिङ मल’ छाती फुकाएर फस्टाइरहेका छन् ।
मल बिनाका चोकहरु बुच्चा लाग्न थालेका छन् उपभोक्ताहरुलाई । किनमेल संस्कृतिमा ‘नुनदेखि सुनसम्म एकै थलोमा पाइने’ मलको नाराले उनीहरुलाई ललिपप देखाएर बानी पारिसकेको छ ।
एकादेशमा नेपालका शहरमा मल नामका यस्ता भवन थिएनन् । शहरमा घर मासिएर सटर र कवलहरुको लम्बेतान व्यापारिक क्षेत्र बनिरहेको छ । अर्कातिर, यहाँका मानिसको उँचाइको मोह र ध्याउन्न अग्ला सपिङ मलहरुले झल्काइरहेका छन् ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, October 10, 20130: Comments
क्याफे कविता नामको समूहले काठमाडौं र बाहिरका जिल्लाहरुमा महिनैपिच्छे कविता कार्यक्रम गर्दै आएको छ, कुनै क्याफेमा कवि र कविताप्रेमीहरु भेला भई कविता सुन्ने-सुनाउने । कार्यक्रमको लाइभ स्ट्रिमिङ हुन्छ र रेकर्ड गरिएका कविताका भिडियोहरु युट्युबमा समेत राखिन्छ ।
समूहले कविताको यस्तो रौनक क्याफेको कुनाका साथै इन्टरनेटका सामाजिक सञ्जालमा पनि जोड्दै आएको छ । यस्तै एक प्रयास हो, ट्वीटरमार्फत कविता कार्यक्रमको आयोजना । #TweetKavita नाममा गरिने यस्तो कार्यक्रममा एक सय ४० अक्षरमा कवि तथा कविताप्रेमीहरुले आफ्ना भावना बाँड्छन् । कार्यक्रम गरिने दिन, समय र अवधि ट्वीटरबाटै @CafeKavita मार्फत पहिले नै तोकिन्छ । प्रविधिको प्रयोग गरी कविहरु अक्षर कोरल्दै सिर्जना एक-आपसमा फैलाउँछन् । ट्वीटरको साँघुरो अक्षरसीमामा कविहरु आफ्ना सिर्जनामा 'गागरमा सागर' भर्छन् ।
गत ३० सेप्टेम्बर बेलुकी आयोजित 'ट्वीट कविता'मा मैले लेखेका केही टुक्रा :
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, October 02, 20132: Comments
भिन्न शैलीको खोजी
[नेपाल साप्ताहिकको असोज १३ गतेको अंकमा प्रकाशित समीक्षा]
डेढ दशकदेखि निबन्ध लेखनमा रहेका रोशन शेरचन आफ्नो भिन्न शैलीको निर्माणमा जुटेका गम्भीर
सर्जक हुन् । त्यसमा उनलाई खासगरी अध्ययनशीलता र त्यसबाट प्राप्त चिन्तनशीलताको जगले थामेको छ । अघिल्ला दुई निबन्धकृति 'मस्तिष्कहरूको मृत्यु' र 'चम्पारन ब्लुज'मा बौद्धिकता, सघन काव्यचेत र बिस्तारै समाजतिरको दृष्टि प्रकट गरेका रोशनले निबन्धमा मनोगत विषयको उडानभन्दा समाजको कुरा फुकाउने लेखनलाई जोड दिएका छन् । पछिल्लो कृति 'धोबीघाट एक्सप्रेस'मा त्यो सामाजिक उत्खन्न अझ प्रखर देखिन्छ ।
निबन्ध लेखनको सुरुवाती बेला एकालाप ढाँचा र मनमौजी भावका निबन्धहरू लेखेका रोशन तेस्रो संग्रहमा आइपुग्दा माझिनुका साथै सन्तुलित बनेका छन् । देश बुझ्न कुना-कन्दराको यात्रामा निस्कने उनी विश्वको अवस्था र गति बुझ्न अध्ययनमा पस्छन् । साहित्यमा विचार र कलाको वजन तौलँदा उनले साहित्य कलात्मक मूल्य र गहन भावसहितको सरल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता खुट्याएका छन् । यसबाट उनले आफ्नो आरम्भिक समयका निबन्धहरूले पाठकीय संवाद नगरेकोमा थकथकी पनि मानेका छन् ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, September 30, 20132: Comments
तिमी नीति-नियम पढाउँछौ
पाप र धर्म बुझाउँछौ
अनुशासनको बार भत्काइरहन मन लाग्छ
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, September 18, 2013 1 : Comments
गोठाटार मिनी फुटबल टिम !
काठमाडौंमा जारी साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाली टिमले एकपछि अर्को जितको झन्डा गाड्दै थियो । रातो जर्सीमा नेपाली खेलाडीहरु मैदानमा चम्किरहँदा मेरो स्मृतिमा भने केही कलिला अनुहार छाइरहेथे । सेमिफाइनल भिडन्तमा नेपालको यात्रामा विराम लाग्दा ती अनुहारले झन् ठूला आकार लिए ।
त्रिभुवन विमानस्थलभन्दा ठीक पछाडि काठमाडौं जिल्लामै पर्ने एउटा गाविस छ, गोठाटार । घरिघरि आँखामा आएर बस्ने ती रहरलाग्दा अनुहार त्यही ठाउँका किशोरहरुको थियो । चम्किला आँखामा राष्ट्रिय स्तरको फुटबल खेलाडी बन्ने सपना पाल्दै खेल अभ्यासमा जुटिरहेको अवस्थामा एक साँझ भेट भएको थियो । गाउँघरमा मोजामा कपडा कोचेर भकुण्डो हिर्काउने र फुटबल नै किनेर पनि साँझ-बिहान शारीरिक तन्दुरुस्ती र समय कटाउन खेल्ने युवा निकै हुन्छन् । तर गोठाटारका यी चार किशोर अलिक फरक लागे । भेट भएको पहिलोचोटि नै विशेष छाप पार्दै गए ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, September 09, 2013 1 : Comments
Labels: गाउँघर, प्रसङ्गवश
आँपको गाढा स्वाद
गाउँघरतिर बगैंचामा यतिबेला लटरम्म आँप निख्रिसके । बजारतिर भने केही जातका आँपले रस चखाउँदै छन् । आँपकै मौसमको मौका छोपेर स्वादमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी 'आँपको रुख' कथाकृति निकालेका छन्, दीपक जडितले । लामो समयदेखि साहित्य लेखनमा रहेका जडितले ढिलो गरी निकालेको पहिलो पुस्तकाकार कृति हो । तर, यतिका समयको साधनाको रङ कथाकारले पुस्तकमा जमेरै उतारेका छन् । झापाको गौरादहदेखि अमेरिकाको विभिन्न राज्यको बसाइका क्रममा फेरिएको हावापानी, बाँचे-देखेको जिन्दगानीको विविध विशेषता जडितका कथाहरूमा उनिएर आएका छन् ।
खासगरी, नेपालको ग्रामीण भेगका सीधासोझा मान्छेको धागो जस्तो कहिले सरल त कहिले गुजुल्टिएको जिन्दगी कथाकारको प्रिय विषय बनेको देखिन्छ । तिनकै दुःखका ठेली, सुखका क्षणिक झिल्का र परिस्थितिले पात्रहरूका बीचमा मच्चाएका हुन्डरीले पाठकलाई कम्पन छुटाउने तागत राख्छ । त्यसमाथि कथानकको सहज प्रवाहले कम्पनलाई असरदार तुल्याउँछ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, July 27, 20130: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, July 23, 20130: Comments
खल्खली @ बल्थली
हावा बिना जीवनको रफ्तार सम्भव छ र ?
बाइकको पछिल्तिरको पाङ्ग्रामा पाँच रुपैयाँको हावा भराएर तीनकुनेबाट हामी बत्तियौं ।
दुइटा बाइकको भर । जम्मा चार भाइ बाँडिएका छौं । पानी पर्ला-पर्ला जस्तो सम्भावनालाई अत्याधुनिक फिरन्ते जोगीहरुको उत्साहले चिर्दै हिंडेको छ । यो यात्राको योजना बुन्नुअघि चिसापानीदेखि नागदहसम्मको कुरा चलेको थियो । कुरा चल्नु एउटा कुरा, बल्थलीसँगै जुर्नु रैछ हाम्रो जोडी ।
बल्थली यात्रामा पहिलोचोटि जाँदै छु । राजधानीको हात जस्तो पसारिएर बसेको काभ्रे जिल्ला नामी छ, गाउँको हरियाली झल्को चखाउन । सहरतिर हरियाली आजकाल होर्डिङबोर्डमा झुन्डिएको हेर्नुपर्छ । कुनै दिन संग्रहालय नै पुग्नुपर्ला । यो त भयो अनिश्चित भविष्यत् कालको कुरा ।
भक्तपुरको जगाति पार गरेर उकालो लाग्ने बित्तिकै धरान काटेर भेंडेटार भेटिए जस्तै हल्का शीतल मौसमले चुम्छ । बाइकहरुको ताँती नै बगेको छ सडकमा । केटो भाग्ला कि भने जस्तो युवतीहरु ट्याप्पै खिपिएर बाइकमा हुइँकिएका छन् । कता हिंडेका होलान् यिनीहरु ? नयाँ ठाउँको घुमघाममा कि एक-आपसको शरीरकै खानतलासी गर्ने उपयुक्त लोकेसन खोजीमा ? बाइकमा हिंडेका जोडीमध्ये केही जोडीका केटीले निकै ‘किफायती’ गरेर लुगा लगाएका छन् । कतिपयको आङमा त लुगाको नाममा एक डोरो धागो र एक थान रुमाल मात्रै छ । सायद केटो हजुरले ‘लोकेसन’मा पुगेपछि छोडाउन धेरै मिहिनेत नै गर्नु नपरोस् भनेर घरबाटै आधी तयारी गरेका निस्केका हुँदा हुन् !
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, July 21, 2013 17 : Comments
हेर्दाहेर्दै ऊ कस्ती भई !
भर्खरै चिनजानको केटोलाई पोइको व्यवहार गर्छे
रिसाउँदा पनि हाँस्छे
गालाको खोबिल्टोमा जाकिरहने उसको काइदा कानुन
कतै खाडल त कतै टापु छन्
अनुहारमा डन्डीफोरले रबर प्रिन्ट हानेका छन् ठाउँ-ठाउँमा
तेरिमा टोक्ने हौ !
तिनै मसिना टापुमा ठेस लागेर बल्ढ्याङ खान्छु
उसका वचन-दुर्वचनको लिकमा
ठीकठाक हिंडिरहेछ एउटा रेल
हेर्दाहेर्दै कस्ती भई ऊ ...
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, July 17, 20130: Comments
तोतेबोली र अक्षरहरु
‘बकुलाले पानी खायो लामो चुच्चाले
यता-उति नगर कान्छी हान्छु जुत्ताले’
सानोमा यस्तै गीत गाउँदो रैछु । तोतेबोलीमा अड्किअड्की गाइने त्यस्ता गीत पनि खुबै हिट हुने ! आफ्नो तोतेबोलीको सम्झना छैन अहिले । बरु मामाघरमा मामाले जिस्काउँदै उच्चारण गरेका गीतका तिनै हरफहरु कानको जालीमा छानिएर सुरक्षित बसेका छन् । भान्जाको दूधे ओठबाट लय र उच्चारण बिग्रेका गीति भाका सुन्न मन लाग्थ्यो होला, सुरुवातका एकाध शब्द फुकाउँदै मामा मलाई उकास्नुहुन्थ्यो – ‘बकुलाले पानी खायो … के रे भान्जा !?’
लामो जुँगा भएकाले ठूलो मामालाई जुँगे मामाका रुपमा चिन्थें म । समयसँगै मेरो तोतेबोलीलाई पलाउँदै र छिप्पिंदै गएका दाँतहरुले घचेटेर झारे । मामाको जुँगा पनि कटानमा परेर ओठका डिल बुच्चा भए । समय मेरा दूधे दाँत र मामाका जुँगाको हिसाब नराखी बेतोडले कुदिरह्यो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, July 12, 2013 1 : Comments
मे महिनामा CaféKavita को पाँचौं शृंखला पूर्वाञ्चल विशेष कार्यक्रम इटहरीमा सकिएको भोलिपल्ट हामीसँग समय उब्रियो । कम्तीमा दिनभरि । बेलुका त हामीले काठमाडौं फर्किन बस चढ्नुपर्ने थियो ।
इटहरीको गर्मी छल्न भेंडेटारतिर उक्लिने कुरा भयो । ‘एसी काठमाडौं’ छाडेर निस्किएका हामी अलिकता गर्मीले पनि हपक्क पाक्दै थियौं । यस्तो अवस्थामा साहित्यप्रति विशेष चाख राख्ने स्थानीय दन्त चिकित्सक दाइसाथीहरुको ‘भेंडेटार प्रस्ताव’ शीतल थियो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, June 11, 2013 1 : Comments
यस पटक ब्लगमा सहोदर दाइको डायरी सुटुक्क ल्याएको छु । जुन उसले २०६२ सालमा लेखेको रैछ । डायरी केहीबेरमा पेश गर्छु । त्यसअघि थोरै भूमिका जरुरी लाग्यो ।
दाइको जागिरे जीवनको सुरुवाती बेला । जम्मा दुई दिनको डायरी टिपोट छ, जेठ २८ र असार ४ गते । दुवै दिन शनिबार परेको छ । कामबाट बल्लतल्ल फुर्सद पाएर लेखेको होला ।
उतिबेला भर्खरै खुलेको स्वाबलम्बन बैंकको जागिरे थियो ऊ । डायरी लेखिएको कापी सामान्य कापी मात्रै छ । दाइसँग त्यसबेला डायरी लेख्‍ने मोटो नोट किन्ने पैसा नहुँदो हो वा त्यसलाई उसले प्राथमिकता नदिएको पनि हुँदो हो । तर यो डायरी मेरो लागि संघर्षको पाठशाला बनेको छ । आफैं पनि जीवनमा धेरै दुःख गरेका र अरुका दुःखबारे देखे-सुने-पढेकालाई डायरीका कुराले नछोलान् ।
हाम्रो परिवारको पुस्ता-दरपुस्तामा लेख्‍ने मान्छे मैं मात्र होला भन्ने लाग्थ्यो । दाइको डायरीले मेरो कीर्तिमान भंग गरिदियो ।
कुनै समयमा डायरी लेखेको रैछ उसले । तर उसलाई कुनै प्रयोजन लेख-सेख लेख्‍नुपरे मलाई नै अह्राउने गर्छ । यतिसम्म कि उसको संस्मरण पनि मैले लेखिदिनुपर्ने !
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, June 03, 20130: Comments
Labels: अतिथि आसन, युवा पुस्ता
यही शीर्षकमा वीपी कोइरालाले उपन्यास लेखिसकेका छन् । उनको नाति पुस्ताको म एउटा चिर्कटो लेख्‍न खोज्दै छु । आविष्कारले संसारलाई परिपूर्ण पार्दै समय जति फुर्सदिलो अवस्थातिर जाँदै छ, त्यति व्यस्त र हतार देखाउँदै छ आफूलाई । उपन्यासबाट चिर्कटोतिरको यात्रा त्यसैको एउटा नमुना मानौं । सीमिततातिरको यात्रा ।
हालैको कुरा हो । यस्तै सीमिततातिर खुम्चिने क्रममा एक वृद्ध दम्पती म बसेको घरमा आएका थिए । घरपतिका बाबु र आमा । मूल घर झापाको झिलझिले । भौतिक सम्पत्ति त अरु पनि थिए । तर, मुख्य सम्पत्ति - चार भाइ छोरा र पाँच बहिनी छोरी । आमा चाहिं बेलाबेला सुनाउँथिन्, आफ्ना छोरा-छोरीलाई पढाई-लेखाई सक्षम र अब्बल बनाएको । गर्वले उनी मक्सिम गोर्कीकी ‘आमा’ जस्तै देखिन्थिन् । आवाजमा रोगको नभई गर्वकै ओजिलो दम हुन्थ्यो । छोराहरुमध्ये जेठा काठमाडौंमा, माहिला विराटनगरमा जग्गा व्यवसायी, साहिंला गाउँमै मास्टरी गर्ने र कान्छा साउदी अरेबियामा रोजगारीमा । पाँच छोरी आ-आफ्नै कर्मघरमा । कान्छा छोरा यसपाली दसैंमा आउँछ भन्दै आमा चाहिं चाउरी अनुहार मुस्कानले चिल्याउँथिन् । बुढा चाहिं त्यति नबोल्ने । बरु मोनालिसाभन्दा अलिक बढ्ता खिस्स हाँसिरहने । जीवनयात्राको क्रममा बुढ्यौलीसम्म सुस्केरा हाल्दाहाल्दै त्यही सुस्केराको ओसले हल्का पहेंलिए जस्ता दाँत । बुढा ७६ वर्षका र बुढी चाहिं ७३ की ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, May 27, 20134: Comments
Labels: समाज, सम्बन्ध
कोही परैबाट लोभी नजर चुहाउँछन्
कोही स्पर्शमा डुलाउँछन् औंलाहरु
सुरुवात गर्छन् हात मिलाएर
मुटुका औंलाहरु हुँदैनन्
हात मिलाउँथे र जान्थे मान्छे
कहाँ बाँकी रहन्थ्यो होला मुटु
केको हुन्थ्यो माया ...
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, March 29, 20130: Comments